Show All Most Popular Cutlery Appetizer Bread Noodle Rice Bowl (ဇလုံထမင်း / ဇလုံထမငျး ) Latt Pan Pyar Fried Chicken (လက်ပံပျားကြက်ကြော်/ လကျပံပြားကွကျကွျော) Rice and Curry (ထမင်းနှင့်ဟင်းလျှာများ / ထမငျးနှငျ့ဟငျးလြှာမြား) Soup Drinks
Rice Bowl (ဇလုံထမင်း / ဇလုံထမငျး )
Latt Pan Pyar Fried Chicken (လက်ပံပျားကြက်ကြော်/ လကျပံပြားကွကျကွျော)
Rice and Curry (ထမင်းနှင့်ဟင်းလျှာများ / ထမငျးနှငျ့ဟငျးလြှာမြား)
No,99, Aung Zaya Road, Kyauk Kone,, Yangon, MM Yankin
52.Tea (လဘက်ရည်ပေါင်း /လဘကျရညျပေါငျး)
39. Bean Parata (ပဲပလာတာ)
17. Nan Gyi Salad (နန်းကြီးသုပ်) (နနျးကွီးသုပျ)
08.Latt Pan Pyar Fried Chicken(Half) (လက်ပံပျားကြက်ကြော်တစ်ခြမ်း/လကျပံပြားကွကျကွျောတဈခွမျး )
10. Fried Rice with Bean (ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်) (ပဲပွုတျထမငျးကွျော)
09.Hta Min Si San with Latt Pan Pyar Fried Chicken (ထမင်းဆီဆမ်း လက်ပံပျားကြက်ကြော် /ထမငျးဆီဆမျး လကျပံပြားကွကျကွျော)
30.Mix Fried (အကြော်စုံ /အကွျောစုံ)
26. Kyar San Chat (ကြာဇံချက်)(ကွာဇံခကျြ)
43. Keema Parata (ကီးမားပလာတာ)
12. Steamed Sweet Pork (၀က်အချိုပေါင်း) (ဝကျအခြိုပေါငျး)
36. French Fries (အာလူးကြော်) (အာလူးကွျော)
37. Soft Boiled Egg
38. Parata (ပလာတာ)
40. Egg Parata (ကြက်ဥပလာတာ) (ကွကျဥပလာတာ)
41. Sugar Parata (သကြားပလာတာ) (သကွားပလာတာ)
45. Plain Cake (ပလိန်း Cake) (ပလိနျး Cake)
50.Milk Bread (နို့ပေါင်မုန့် /နို့ပေါငျမုနျ့ )
Pyay Parata (ပြည်ပလာတာ)(ပွညျပလာတာ)
Chicken Soup (ကွကျပေါငျးရညျ) (ကြက်ပေါင်းရည်)
Parat with Mutton Soup (ဆိတျစှပျပလာတာ) (ဆိတ်စွပ်ပလာတာ)
33. Toast Cubes (ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကြော်) (ပေါငျမုနျ့ကွကျဥကွျော)
34. Butter Toast (ပေါင်မုန့်ထောပတ်သကြားမီးကင်) (ပေါငျမုနျ့ထောပတျသကွားမီးကငျ)
18. Nan Pyar Salad (နန်းပြားသုပ်) (နနျးပွားသုပျ)
19. Shan Noodle (ရှမ်းခေါက်ဆွဲ) (ရှမျးခေါကျဆှဲ)
21.Malaysia Fried Noodle (မလေးရှားညှပ်ခေါက်ဆွဲကြော်/မလေးရှားညှပျခေါကျဆှဲကွျော )
22. Myee Shay (မြီးရှည်) (မွီးရှညျ)
23. Sticky Noodle (ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ) (ကျောရညျခေါကျဆှဲ)
24. Si Chat Noodle with Pork Ribs (နံရိုးပေါင်းဆီချက်ခေါက်ဆွဲ) (နံရိုးပေါငျးဆီခကျြခေါကျဆှဲ)
25. Si Chat Noodle (ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ) (ဆီခကျြခေါကျဆှဲ)
28. Noodle Salad (ခေါက်ဆွဲသုပ်)(ခေါကျဆှဲသုပျ)
28.Nga Ni Tu Salad (ငါးနီတူသုပ်/ငါးနီတူသုပျ)
Pork Leg Sticky Noodle (ဝကျလကျကျောရညျခေါကျဆှဲ)
Sticky Noodle with Pork Ribs (နံရိုးပေါငျးကျောရညျ) (နံရိုးပေါင်းကော်ရည်)
Samosa Salad (စမူဆာသုပ်) (စမူဆာသုပျ)
01.Roselle Bowl (ချဉ်ပေါင်ဇလုံ / ခဉျြပေါငျဇလုံ )
02. Pyay Rice Bowl (ပြည်ထမင်းဇလုံ /ပွညျထမငျးဇလုံ)
03.Sagaing Rice Bowl (စစ်ကိုင်းထမင်းဇလုံ /စဈကိုငျးထမငျးဇလုံ)
04.Black Bean Paste Bowl (ပုန်းရည်ဇလုံ /ပုနျးရညျဇလုံ)
05.Chicken Liver Bowl (ကြက်အသည်းအမြစ်ဇလုံ /ကွကျအသညျးအမွဈဇလုံ)
06. Prawn Roselle Bowl (ပုဇွန်ချဉ်ပေါင်ဇလုံ /ပုဇှနျခဉျြပေါငျဇလုံ)
Sweet Pork Rice Salad Bowl (စလုံထမငျးနယျ ဝကျခြိုပေါငျး)
Chicken Curry Rice Salad Bowl (စလုံထမငျးနယျ ကွကျသားဟငျး)
Fried Chicken with Rice and Fish Paste Sauce (ငါပိရခြေို ထမငျးကွကျကွျော )
07.Latt Pan Pyar Fried Chicken (Whole) (လက်ပံပျားကြက်ကြော်တစ်ကောင် /လကျပံပြားကွကျကွျောတဈကောငျ )
Paste Rice with Latt Pan Pyar Fried Chicken (ငပိရေချိုထမင်းနှင့် လက်ပံပျားကြက်ကြော်/ငပိရခြေိုထမငျးနှငျ့ လကျပံပြားကွကျကွျော)
11. Steamed Rice with Bean (ပဲပြုတ်ထမင်းဆီဆမ်း) (ပဲပွုတျထမငျးဆီဆမျး)
13. Chicken Curry (ကြက်သားဟင်း) (ကွကျသားဟငျး)
14. Kachin Chicken Curry with Rice (ကြက်ကချင်ထမင်း) (ကွကျကခငျြထမငျး)
15. Chicken Basil with Rice (ကြက်ပင်စိမ်းထမင်း) (ကွကျပငျစိမျးထမငျး)
15. Pork Basil with Rice (၀က်ပင်စိမ်းထမင်း) (ဝကျပငျစိမျးထမငျး)
Chicken Liver (ကြက်မြစ်ကြက်သည်းဟင်း)(ကွကျမွဈကွကျသညျးဟငျး)
Steamed Rice with Pork Leg (ဝကျလကျထမငျးပေါငျး)
51.Coffee (နှပ်ကော်ဖီ /နှပျကျောဖီ)
54. Sunkist Juice (ဆန်းကစ်သီးဖျော်ရည်) (ဆနျးကဈသီးဖြျောရညျ)
55. Avocado Juice (ထောပတ်သီးဖျော်ရည်) (ထောပတျသီးဖြျောရညျ)
56. Honey Lime Juice (ပျားသံပုရာဖျော်ရည်) (ပြားသံပုရာဖြျောရညျ)
57.Plum Sherbet (ဇီးဖျော်ရည်/ဇီးဖြျောရညျ)
58. Tamarind Juice (မန်းကျည်းဖျော်ရည်) (မနျးကညျြးဖြျောရညျ)
59.Tan Boo Juice (သံဗူးဖျော်ရည် /သံဗူးဖြျောရညျ )
60. Lime Juice (သံပုရာဖျော်ရည်) (သံပုရာဖြျောရညျ)
61. Apple Juice (ပန်းသီးဖျော်ရည်) (ပနျးသီးဖြျောရညျ)
62. Yoghurt (ဒိန်ချဉ်) (ဒိနျခဉျြ)